Trano - Software marika EMD mora tarehy (Signage Signage)
Easy Easy Display Display EMD Software (Dikan-teny fanarenana)
Ny vahaolana digital signage mora indrindra eo amin'ny tsena.
Fashion & Varotra
Trano fisakafoanana sy kafe
Sekoly sy fampianarana
Zahao ny horonanay
Ny lafo indrindra eny an-tsena.
Na orinasa mpandraharaha kely na orinasa lehibe ianao dia mora aseho mora foana ny fampisehoana multimedia amin'ny fampisehoana marobe. Miaraka amin'ny fahazoan-dàlana 1, azonao atao ny maneho loharanom-baovao 24 samihafa amin'ny indray mandeha, manerana ireo seho 6 samihafa. Miresaha aminay momba ny vahaolana momba ny orinasam-pifandraisana ho an'ny safidy fampisehoana tsy misy fetra.
DIA DIA VONONA
Fampivoarana solosaina sy fahitalavitra.
Ampidiro ny rindrambaiko Easy Easy Display.
DIA DIA FAHATELY
Hamarino ny fampisehoana aseho.
Easy Multi Display dia ho an'ny fikambanana rehetra te-hampiseho vaovao nomerika amin'ny mpanjifany sy ny vahiny.
Toeram-pisakafoanana sy trano fisakafoanana
Fivarotana lamaody sy fivarotana fivarotana
Asehoy amin'ny zona media 24 tsy manam-paharoa
Fanavaozana rindrambaiko rahona
Fanavaozana maimaimpoana mandritra ny 12 volana
1 Fiofanana an-tserasera amin'ny Staff Support
Fametrahana & Fanohanana eo an-toerana
​Safidy ny fiteny: anglisy, frantsay, espaniola mandroso ...
Mila tolotra & fihenam-bidy manokana?
Fampisehoana fampisehoana marika mora
Copyright © 2020 Easy Easy Display Display EMD Software (Dikan-teny fanarenana)
Salama, ahoana no ahafahako manampy anao?